Akwụkwọ Akụkọ nke 9 Mmiri 2020 - Regwọ Ọrụ .gwọ
Home Akwụkwọ Akụkọ nke 9 Mmiri 2020
Akwụkwọ Akụkọ nke 9 Mmiri 2020
Nabata na oge opupu ihe ubi! Anyị na-atụ anya na ị na-anụ ụtọ ihu igwe mara mma na ịnagide nke ọma na gburugburu ebe obibi anyị na-achọta onwe anyị n'oge opupu ihe ubi a. Nọrọ ná nchebe.
Na Onyinye wardgwọ wegwọ ahụ, anyị ejirila ohere nke oghere dị na akwụkwọ ndekọ anyị iji nweta ọtụtụ ọrụ gụnyere akwụkwọ akụkọ a gbasiri ike. Ahem! Ndị a bụ ụfọdụ n’ime ọrụ ndị mere ka anyị jiri ọrụ n’aka n’ọnwa ole na ole ndị gara aga: izi ihe ọmụmụ na okwu n’ọtụtụ ebe; na-amụ nyocha ọhụrụ; na-emepụta akwụkwọ nyocha n'onwe anyị; na-ekwu okwu n'ụlọ akwụkwọ na ndị nta akụkọ ma na-eme atụmatụ atụmatụ anyị maka afọ na-abịa. Obi uto, obi uto na obi uto.
Na mgbakwunye na isi akụkọ, anyị ahọrọla blọọgụ ole na ole site na ọnwa ole na ole gara aga ma ọ bụrụ na ịgbaghara ha na weebụsaịtị. A bụ njikọ na isi ndepụta nke Blọọgụ.
Ọ dị oke mfe iji oge efu na-atụgharị uche ma na-egbuke egbuke banyere akụkụ na-adịghị mma nke oge a. Yabụ iji dozie nguzozi ntakịrị ebe a bụ ụfọdụ aphorisms iji tinye echiche anyị na nke ọma:
"A hụrụ m gị n'anya site n'iku ume, ịmụmụ ọnụ ọchị, anya mmiri nke ndụ m niile!" nke Elizabeth Browning dere
"Lovehụnanya bụ naanị ihe anyị nwere, naanị otu ụzọ anyị nwere ike isi nyere ibe anyị aka." nke Euripides
"Mathụnanya na-eto eto na-asị: 'Ahụrụ m gị n'anya n'ihi na achọrọ m gị.' Lovehụnanya tozuru etozu na-asị: 'Achọrọ m gị n'ihi na ahụrụ m gị n'anya.' “ site n'aka E. Fromm
Breaking News maka oge opupu ihe ubi 2020
Akwụkwọ ọhụrụ nke ndị nne na nna maka nne na nna gbasara mmetụta Porn na ụmụaka
Biko debanye aha maka Vimeo ka lee ihe na-adọkpụ maka akwụkwọ ọhụrụ a nke nne na nna na New Zealand mere. Nne ahụ bụ onye Scotland.
Ihe ụgbọala na-adọkpụ bụ n'efu, mana ikiri vidiyo na-akpata ya na-efu dollar ole na ole. Rob na Zareen mere nke a na akpụkpọ ụkwụ ịkwụ ụgwọ iji nkà ha na mkpebi siri ike, biko biko zụta ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike. Daalụ.
BBC Scotland: Itoolu - Mmekọahụ nke Mmekọahụ
Na Disemba afọ gara aga, BBC Scotland The Nine gbara TRF's Mary Sharpe ajụjụ banyere ịrị elu dị egwu n'okwu banyere ịkwa iko na-esochi ọnwụ Grace Millane na New Zealand. Lee Ajụjụ ọnụ Ebe a.
Mary Sharpe, Onye isi oche nke Regwọ Ọrụ andgwọ na onye nta akụkọ Jenny Constable, ya na ndị ọbịa ụlọ ọrụ Nine Martin Geissler na Rebecca Curran
Ọnọdụ a dị mwute abụghị nke dịpụrụ adịpụ ma ọ gbagwojuru anya karịa ka ọ dị na mbụ. Dabere na nyocha nke 2019 site na Sunday Times okpukpu abụọ ka ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-erubeghị afọ iri abụọ na abụọ (Generation Z) na-ahọrọ mmekọahụ siri ike na BDSM (ịgba ohu, ịchịisi, mwute na masochism) dị ka ụdị egwuregwu ha kachasị amasị ha ma e jiri ya tụnyere ụmụ okorobịa. Nke a na - eweta nnukwu nsogbu maka ụlọ ikpe na ikpe mwakpo mmekọahụ mgbe ha na - atụle ma enwere nkwenye ezi maka ịkwa iko, ụdị BDSM.
Valentbọchị Valentine na Belfast
Obi dị anyị ụtọ na nnabata a nabatara anyị na ụbọchị Valentine na Lisburn, nke dịdebere Belfast. Anyị bịara isonye na Northern Ireland Sexual Health Week. Enwere ndị ọkachamara na ndị ọrụ nlekọta ahụike na ndị ọrụ mmekọrịta dị egwu. Anyị kwuru banyere isiokwu bụ́ “Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ nke Intanet na Mmekọahụ nke Mmekọahụ.” Ọzọkwa, o jughị anyị anya ịchọpụta na ọtụtụ GP, nwoke na nwanyị, amaghị banyere njikọ dị n'etiti nnukwu ịntanetị na-eji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ị useụ ọgwụ ọjọọ na ụmụ okorobịa. Ha ga-achọ ịkpọbata anyị ọzọ.
TRF na Lagan Valley Civic Center, Lisburn na Northern Ireland.
Gee ndị ọkachamara riri ahụ ntị
Ọ ga-abara gị uru n'ezie iwepụta oge Gee ntị ma mụta ihe site na ndị prọfesọ abụọ nke akparamaagwa. Kent Berridge si Mahadum Michigan, USA na Frederick Toates si Mahadum Open dị na UK na-eduga ndị ọkachamara n'ihe riri ahụ. Kedu ihe na-akpali akpali, obi ụtọ na ihe mgbu? Ọ dị oke mkpa ịghọta ka ụmụ anyị na ndị na-eto eto na-eri agụụ mmekọahụ, ịgba chaa chaa, ịgba chaa chaa wdg. Ọ bụ nzọụkwụ mbụ ka anyị wee nyere ha aka idu ndụ dị mma n'ọdịnihu.
Prọfesọ Kent Berridge na Frederick Toates
Na-ezi ihe na Scotland
Anyị nwere obi ụtọ ijikwa otu nzukọ ọmụmụ ihe ụbọchị ikpeazụ na 17th Machị na Kilmarnock tupu mkpọchi ahụ ejide. Isiokwu ahụ bụ "Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internetntanet na Ime Ihe Ike."
Otu ihe magburu onwe ya nke sitere na ogbako a na mbụ bụ na ndị omekome na ndị na-ebo ebubo ime ihe ike n'ụlọ na-emeso ndị ọchịchị ihe n'ụzọ dị iche. Dịka ọmụmaatụ, enwere ngwaọrụ nyocha ihe egwu dị iche iche maka ụdị nke ọ bụla ma na nke ọ bụla abụghị okwu gbasara ị addictionụ ọgwụ ọjọọ. Site na ime ka otu esi eji ihe omimi nke ntaneti eme ihe nwere ike ime ka ndi mmadu ghara ime mkpebi, mmegide na enweghi ike n'ime ndi oru, ndi ikpe na-acho ndi mmadu na-aru oru nwere ike ichota mmechi ka mma iji nyere aka belata nsogbu nke ime ihe ike na-aga n'ihu. Oké egwu porn nwere ike iduga ma ime ihe ike n'ụlọ na mmejọ mmekọahụ. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na Kansụl a ọzọ na afọ a.
Ọchị, obere vidiyo maka ụmụaka nọ n'ọgbọ niile!
Onyinye wardgwọ isgwọ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ nke òtù dị iche iche. Anyị na-eme mkpọsa na gọọmentị UK iji mejuputa iwu nkwenye nke Age maka saịtị porn. Biko ziga vidio a nye ọtụtụ ụmụaka, ndị nne na nna, òtù ndị ntorobịa, ndị omeiwu, ndị mgbasa ozi mmekọrịta ka ị nwere ike ịkwado ozi ahụ. Chọta ya ebe a: https://ageverification.org.uk/
“Ntinye aka” bụ banyere ịghọgbu ụmụaka ime ihe na-ekwesịghị ekwesị, dịka ọmụmaatụ, mgbe ha na-egwu egwu. Mgbe ahụ na-enweghị ihe nwatakịrị ahụ maara, "ihe oyiyi ma ọ bụ ndekọ nke omume na-ekwesịghị ekwesị" weghaara ". A na-ejizi ha emepụtakwa onye ahụ. Pedophiles na ndị ọzọ na-edina agụụ mmekọahụ na-agụsi agụụ ike na-ede ihe ma yabụ ndị na-enweghị mmekọahụ ọ bụla gbasara ụmụaka. Ha na acho uzo di nfe inweta ego ma obu ngwongwo. Nke a nwere ike ịna-ewute ụmụaka ndị na-amaghị ihe ha ga-eme ma ụdị ihe ahụ mee.
Nnukwu Porn na-achọ iji ọnụọgụ ọnya na-efe efe
"N'oge nsogbu, ụlọ ọrụ porn na-agbakwụnye nhụsianya nke mmadụ. Pornhub emeela ka ọdịnaya zuru oke n'ụwa niile. " Nlele na ire ahịa agbaala rịa n'ihi…
“Na 1980 nkiri Ụgbọelu!, Onye na-ahụ maka ụgbọelu bụ Steve McCroskey na-agbasi mbọ ike iduzi ụgbọelu nke ndị nri ya na-egbu egbu na nchekwa. O kwuru, sị, “Ọ dị m ka à ga-amata m n’izu ọjọọ ka m kwụsị ị smokingụ sịga. Mgbe e mesịrị, ọ gbakwụnyere na ọ bụkwa izu na-ezighi ezi 'ịkwụsị amphetamine' na kwa 'izu na-ezighi ezi ịkwụsị ịmịcha mmanụ.'
Ndị nne na nna na-ajụkarị anyị ihe gọọmentị kwesịrị ịdị na-eme iji belata ihe egwu ịntanetị na-emetụta ụmụ ha. Nke a blọọgụ na-ewebata ụfọdụ ndị egwuregwu kachasị mkpa, gụnyere njikọ ụwa niile WePROTECT.
Pịa Ebe a ịmatakwu banyere Global Alliance na otu "Anya ise".
O nwere ike iju ndị nne na nna anya mgbe ha kwetara na ha na-edina ibe ha ma ọ bụrụ na ha ekweta ihe niile ha na-eme. Nnyocha na-egosi na ọ na-emetụta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-ekiri ka ọ na-agba ume iji ike emegbu mmadụ, aghụghọ na aghụghọ. Nke a blog agụnye peeji nke anyị banyere mmekọahụ na iwu. O nwekwara ihe na-adọrọ mmasị site na akwụkwọ akụkọ Guardian.
Ntuziaka ndị nne na nna na-enyefe na Intanet Pornntanetị
N'ịbụ ndị nọkọtara ọnụ n'ụlọ n'oge ọrịa a na-efe efe, ọtụtụ ụmụaka nwere ike ịnweta ịntanetị ga-enweta ihe ndị okenye. Nke a nwere ike ịdị ka ihe egwuregwu na-adịghị emerụ ahụ, mana nsonaazụ ya ga-egosi mgbe oge ruru. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna mụta ihe niile ị nwere ike gbasara ịgwa ụmụ gị okwu gbasara ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọ dịghị ihe dị ka porn nke gara aga. Lee nke anyi Ndị Nne na Nna Na-eduzi Ịntanetị maka vidiyo dị iche iche, edemede, akwụkwọ na akụrụngwa ndị ọzọ. O nwere ike inyere gị aka inwe mkparịta ụka ndị ahụ siri ike.
Foundationgwọ Ọrụ ongwọ na Twitter
Biko soro Thegwọ Ọrụ ongwọ na Twitter @brain_love_sex. N'ebe ahụ ị ga-ahụ mmelite oge niile banyere nyocha ọhụụ na mmepe na mpaghara a ka ha si apụta.